Dumarka Raga Ay Jecelyihiin Waa Kuwo 10-Kaan Leh - Cishqi
Muqdisho (Cishqi) – Maxay jecelyihiin dumarka? Waa kuwee dumarka raga ay jecelyihiin ama ay ka helaan, jawaabtu waa mid fudud.
Marka la isweydii waa kuwee dumarka raga ay jecelyihiin, durbaba rag fara badan ayaa ku jahwareerayo. In kastoo dumarka raga ay ugu jecelyihiin ay horay u soo bandhigeen, hadana rag fara badan ayeey weli ku adag tahay in ay fahmaan.
Hadaba aan kula wadaagno 10 calaamadood oo kuu qishayo dumarka raga ay ka helaan ama ay jecelyihiin.
Dumarka Raga Ay Jecelyihiin waa kuwo leh 10 kaan calaamad
Calaaamadahaan soo socdo ayaa ah calaamado inta badan ay dumarka ka fiiriyaan raga. Waana calaamadaha ugu badan ee lagu garto dumarka raga ay ka helaan.
Erayo jaceyl 2021
Erayada raga jeceylihiin
Ninka Xaaskiisa si dhab ah u jecel
1. Dumarka waxa ay jecelyihiin raga nadaafada badan
2. Dumarka waxa ay jecelyihiin raga u dhoolacadeeyo
Dhoolacadeyntu waa qeyb Kamid ah sunada Nabiga SCW, waana qeyb aad u muhiim ah. Waa mid Kamid ah qeybaha ugu muhiimsan ee lagu garto qofka soo jiidashada badan. Marka aad dhoolacadeyso waxaad muujineysaa inaa tahay qof saaxibtinimo leh misana la fahmi karo.
3. Raga xaragada badan
4. Raga aadka u degan
Dumarka marka ay raga ka xulanayaaan gayaankooda, waxyaabaha ugu horeeyo ee ay ninka ka fiiriyaan waa degenaantiisa. Haddii aad tahay nin degan, waxaad kamid tahay dumarka raga ay ugu jecelyihiin.
Dumarku kama fikiraan maanta oo kaliya ee waxa ay ka fikiraan beri. Ninka ay noloshooda la dhameysan doonaan inuu ahaado mid degan, xittaa haddii ay wax qaldan sameyaan. Ninku waa in uu ahaadaa mid u dulqaato, qaladaadkoodana fahansiiyo.
5. Raga muujiyo rabitaankooda
Waxaad aragtay xabadoo shidan oo sida Kiin Jaamac oo kale ah. Kala Xiran, dhex yar oo macaan leh.
Maalin walbaa waxaa la raacdaa isha. Weey ku soo fiirisaa laakin uma sheegan kartid rabitaankaaga, taasi ma ahan wax fiican. Ha sameyn sidaas oo kale.
Dumarka raga ay jecelyihiin waxaa kamid ah ninka u muujiyo rabitaankiisa. Nin aanan ka cabsan waxa uu rabo iyo waxa uusan rabin.
6. Raga aan dumarka bahdilin
7. Raga balanta oofiyo
Xusuusnow: Diinteenu suuban waxa ay na fareysaa inaan balanta mar walbaa oofino.
8. Raga aanan dhacdhaca badneyn
U hadlo sida uu doono. Tani waxa ay sabab u noqoneysaa inaad single sii ahaato. Xabad walbaa oo aad jeclaato liifada kuu gaabiso.
Marka aad hadleyso ku hadal, hadalo miisaaman oo aanan qofna wax u dhimeynin.
9. Raga hadalka macaan leh
Raga ugu soo jiidashada badan waa kuw loogu magac daray shabeel nagood. Markeey hadlaan durbaba dumarka weey u riyaaqaan. Waxa ay ku hadlaan had iyo jeer hadalo macaan oo dareen leh sida hadaladaan oo kale: Hadalo macaan ah oo xul ah
10. Raga siiyo mudnaannta koobaad
Aragtidaada waa inoo mihiim….. iwm.
Waxaan rajeyn inaad nala dhacday qormadaan oo ay kaa caawisay waxyaabo badan. La wadaag asxaabtaada adigoo riixayo mid kamid ah calaamadaha Social Mediyaha ee halkaan hoose kaaga muuqdo.
Waad ku mahadsantahay booqashadaada!
Qoraa: Saabiriin Sabnaa – Cishqi-Team